Shiweeyinistaayigerfi Rahiim Sterliing Manchastaritti godaanan; waa'een S Raamos, K Benzemaafi Di Mariyaa akkuma rarra'etti - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Shiweeyinistaayigerfi Rahiim Sterliing Manchastaritti godaanan; waa’een S Raamos, K Benzemaafi Di Mariyaa...
Shiweeyinistaayigerfi Rahiim Sterliing Manchastaritti godaanan; waa’een S Raamos, K Benzemaafi Di Mariyaa akkuma rarra’etti
Shiweeyinistaayiger , Sterliing, Kadiiraafi Teveez kilaboota isaanii gadi lakkisuun mirkanaayeera
Oduun oo’aan ammaa isa gooliifi geebaa miti; isa taphattoonni kilabii isa tokkoo gara isa biraatti daddarbuu addeessu malee. Kanumaan wolqabatee oduun gurguddaan kan dhagayamaa jiru gama kamiiyyuu miti- gama Priimer Liigii Ingiliiziiti. Priimer Liigii keessatti, dimshaashumatti, worraaqsi cimaan kan geggeeffamaaru fakkaata. Kun ta’aa jiraachuu isaa maaltu mirkaneessa?
Tibbana Roobiin van Persiin Manchastar Yunaayitidiifi Priimer Liigii (maan’dhee isaa) gadi lakkisee Turkitti qajeeluun ifa ta’eera. Amma ammoo, Shiweeyinistaayiger Baayer Muniikitti naga dhaammatee gara Manchastar Yunaayitiditti godaanuu isaa labseera. Shiweeyinistaayiger Man Yuutti kan dabalame woliigaltee woggaa sadiif gatii miliyoona £12’n. Akka woliigaltee Shiweeyinistaayiger Man Yuu woliin mallatteessetti torbetti mindaa £275,000tu kiisa isaatti dhangala’a. Taphataan jidduu taphatu tokko yoo torbetti mindaa hanganaa argatu Shiweeyinistaayiger seenaa Priimer Liigii keessatti isa jalqabaati.
Shiweeyinistaayiger naannoo woggaa 17f Baayer Muniik wojjiin ture. Jaalala leenjisaa Man Yuuf, Luwii van Gaal, osoo hintaane jaalalaafi kabajaa Man Yuuf qabuuf gara magaalaa Manchastaritti qajeeluu isaas Shiweeyinistaayiger dubbateera.
Magaaluma Manchastarii osoo hinbaane, Manchastar Yunaayitid daran ufijaaruuf jecha ija isaa Sarjiyoo Raamos, Kavaaniifi Levaandoviskii irra kaayyatuu isaati maddi odeeffannoo garagaraa kan agarsiisan. Kan isaan biroo 50/50 jechuun nidanda’ama. Hireen Sarjiyoo Raamos Riyaaliin gadi dhiisee Man Yuutti makamuu baay’ee dhiphaa ta’uu isaa, Filoreentiinoo Pereez, perezidaantiin Maadriid ifa godhuu Maarsaan gabaasseera. Oduma wolqabataan, ittisaan Man Yunaayitid, Rafaa’eel, kilabii kana gadilakkisuun isaa kan hinoolle ta’utu himama. Manchaastariin gadilakkise taanaan fedhiin isaa Seeri A ta’uus Rafaa’el hindhoksine.
Achuma Priimer Liigitti, Rahiim Sterliing kilabii Liivarpuul gadi lakkisee Manchastar Siitiif mallatteesuun isaa mirkanaayeera. Sterliing Liivarpuul irraa gara Man Siititti kan ce’e kafaltii miliyoona £49’n. Baay’inni maallqa kanaa seenaa taphattoota kilabii tokko gara isa birattii ceesisuu keessatti Rahiim Sterliingiin sadarkaa 12 irra kan isa kaayu. Rahiim taphataa cimaadha; qaaliidhas ammoo.
Oduma gabaa taphattootaa kana keessaa osoo hinbayin, Saamii Kadiiraan Riyaaliin lakkisee Juvee yoo seenu Kaarloos Teveez ammoo Juvee dhiisee kilabii biyya dhaloota isaatti, Bokkaa Juuniyers, debi’eera.
Previous articleDhimmoota hariiroo lamee woljaallattan jidduu jiru diiguu malan
Next articleXayyaarri samii imala km biliyoona 4.8 booda plaaneetii Pluutoo bira gaye